Ukuba umhla, isemthethweni ingcebiso-intanethi free ingaba kakhulu ethandwa kakhulu. Oku kubangelwa ukuba akukho mntu ufuna ukuchitha naliphi na ixesha okanye imali, wanting ukufumana elinolwazi ingcebiso.
Kodwa ngaphantsi ngaphantsi kunokwenzeka ukuba ahlangane experienced iingcali, abathandayo ukuphendula imibuzo ka-abathengi ngaphandle efuna intlawulo kuba oko. Yokuba ngamanye amaxesha ulungiselelo sanele isemthethweni ingcebiso ifuna hayi kuphela imizamo ka-uluhlu isemthethweni kwaye sublegal izenzo kwaye matyala senzo. Kwaye kuya kufuna ezininzi ixesha ukuba uyakwazi ukusebenzisa ukunceda abanye abathengi.
Xa kufuneka mna udibane a lawyer kuba free kwi-intanethi.
Kodwa nangona kunjalo kwezinye kwiimeko buza a lawyer-intanethi free impendulo yakho kumbuzo uyakwazi zama. Oku kuluncedo kakhulu kwi-zilandelayo iimeko:
Ukuba umbuzo ifuna njalo ebalulekileyo umqulu ngoku umthetho.
Ukunikezela i-luhlomle kuwo ngu kunokwenzeka ngaphandle isemthethweni iinkalo zobuchule lwamaxwebhu.
Ngamanye kwiimeko, ukuba buza kuba free isemthethweni uncedo, ungafumana waiver. U-nje jonga nokungabikho ixesha kwaye iya kuba kwi-eyakhe ekunene.
Zama ukufumana impendulo umbuzo kwi websites apho ingcebiso lawyer-intanethi kuba kweeyure eziyi. Kodwa kule meko nayo kuyimfuneko ukuba abe ukulungele ukuba lasebusuku iintlanganiso zokubonisana iya kuhlawulwa. Cela icebiso specialists zethu umthetho ifemi. I-iingcali ukusebenza apha kuya kusinceda nkqu ezininzi kunzima imeko kwaye sixelele njani ukufumana ngaphandle imeko kunye eqhelekileyo iindleko.